Is-qabqabsiga Firqooyinka Diimeed Iyo Dawlad Deegaanka Somaliitoobiya.
Saturday June 27, 2020 - 14:04:24 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Sadam Osman kaabash.
DDSI, waxay la dagaalami jirtay guud ahaan faafinta, dhigista, gudbinta iyo barashada heerka sarraysa ee diinta islaamka. Waxay go'doomiyeen xeeladkasta oo qofkastaa ku noqon karo macalin ama sheekh diimeed oo dadka aqoontiisa iyo wacdigiisa soo gaadhsiin kara. Waxaa wadanka joogay xoogaa wadaado xeraw ah oo wadanka gudihiisa cilmi ruug ku ahaa. Waxaa iyana wax sii baray wadaado kale isla wadanka wax ku bartay, sii ba xarumaha xerta oo aan cilmigoodu ku dhisnayn baadhis iyo kale shaandhaynta diinta iyo aaraada kolba wadaadka markaas kitaabka marinaya iyo wadaadka kitaabka katibay. Wadanka waxaa ku yaraa adeegsiga internetka iyo kitaabada gelaaya. Sidaa daraadeed, qofkasta oo wadanka soo gala saansaan diimeedna leh sida gadhka, khamiiska, surwaalka gaaban, waxaa loo aqoonsanaa argagixiso ka soo tallaabtay xuduuda. Qofkaasna waxa uu ku amranaa in lagu rido bac ilaa inta laga gaynayo xarumaha baadhista denbiyada.
Labada wadaad murankoodu waxa uu ku dhisanyahay sidatan; 'Wadaadada danbe waxay taaganyihiin ama aaminsanyihiin in wadaadadan Xerta ahi yihiin bidcoolayaal, waagii horena ay dawladdu uun taageersanayd, in deegaankooda iyo ubadkii ay wax barayeen aanay cilmi saxa barin oo iyaga laftoodu u baahanyihiin in wax la baro, in wadaadadu yihiin daroogaystayaal shaarica iyo makhaayadaha ku ruuga Qaadka, in wadaadada laftoodu aanay weligood shaqaysan ee ay dheecaanka iyo xoolaha agoonta si xaqdarro ah ku cunaan'. 'Wadaadada horena waxay taaganyihiin ama aaminsanyihiin in dhulkii ay joogeen ku soo duuleen bidcoolayaal lacag sita oo dibada laga masruufo, in lagu soo wariday macalimiin kitaab gaaba oo deegaankii ay joogeen la yidhi wax ka dhiga doolarna dibada looga soo shubo, in ay dagaal iyo dil ka xigaan oo ay naftooda badbaadinayaan'.
Degamada Maxamed Mooge.